iPhone ay xireen IMEI - ogow haddii iPhone la xaday
iPhone waxaa xiray IMEI
Boggan waad ku awoodaa ogow haddii iPhone ay xiran tahay IMEI. AMAn iPhone waxaa xiri kara IMEI maxaa yeelay waa la xaday, ayaa lumay ama amaah uu kula leeyahay wadaha.
Hubi haddii ay kaa iibinayaan iPhone la soo sheegay intaadan iibsan. IPhone-ka IMEI-qufulan looma isticmaali karo wax xambaara kiisaska badankoodna lama furi karo.
0.1 IPhone ma xiran tahay mise waa la xaday?
1 Sida loo ogaado haddii iPhone la xaday
2 Ma furi kartaa iPhone-ka uu ku xiran yahay IMEI?
IPhone ma xiran tahay mise waa la xaday?
Isticmaal foomka soo socda si aad u ogaato haddii iPhone uu xiran yahay ama la xaday:
Waxaad heli doontaa dhammaan xogta iPhone ee ku jirta emaylka laxiriira xisaabtaada Paypal ama emaylka aad qorto haddii aad ku bixiso kaarka deynta. Caadi ahaan waxaad ku heli doontaa macluumaadka 5 ilaa 15 daqiiqo gudahood, laakiin xaaladaha qaaska ah waxaa laga yaabaa inay dib u dhacaan illaa 6 saacadood.
IMEI waxaa lagu calaamadeeyay in la xaday / lumay keydka Apple: Maya / Haa
Sidoo kale haddii aad rabto sidoo kale waad hubin kartaa inay tahay iyo in kale qufulan by iCloud, shirkaddee ayaa ah taleefankaaga iPhone, haddii uu leeyahay qandaraas joogto ah iyo haddii ay noqon karto furid IMEI Adoo dooranaya ikhtiyaarka hoos-u-dhaca bixinta, waxaad kaliya bixin doontaa wax yar oo dheeraad ah si loo ballaariyo macluumaadkan.
Sida loo ogaado haddii iPhone la xaday
Aad ayey muhiim u tahay in markaan iibsaneyno qalab cusub oo gacan labaad ah Apple iPhone aan si ku habboon u ogaanno haddii iPhone-kani uu xiran yahay IMEI. Sababta ugu weyn ee ay shirkaduhu u doortaan inay ka xanibaan aaladda moobaylka lambarkooda IMEI waa maxaa yeelay milkiilaheeda ayaa meel khalday ama si sharci daro ah u xaday. Taasi waa sababta aan u hubin lahayn ku-xirnaanta lambarka IMEI ee ku xiran qalab, sidaasna ku xaqiijinayo in asalkiisu yahay gebi ahaanba sharci.
Taasi waa sababta adeegga aan bixinno uu kuu oggolaan doono inaad ku ogaato isla markiiba isla haddii iPhone-ka aad qorsheyneyso inaad iibsato uu IMEI xiran yahay iyo in kale. Sidaas awgeed ka hortagga khiyaanooyinka suurtagalka ah iyo helitaanka qalab asalkiisu sharci ahayn.
Ma furi kartaa iPhone-ka uu ku xiran yahay IMEI?
Guud ahaan, waa shirkadaha taleefannada ee leh awoodda ay ku xiraan kuna furaan aaladaha iyada oo loo marayo lambarka IMEI. Taasi waa sababta, haddii aan rabno inaan furno iPhone horay u xannibnay IMEI, waxaan toos ugu aadaynaa shirkada taleefanka ee masuulka ka ah go'doominta, si rasmi ah loo xaqiijiyo in qalabka la soo ceshaday oo uu ku jiro gacanta mulkiilaheeda sharciga ah, tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa qaansheegtayada quseeya.
Waa wixii kor ku xusan, ee aan bixinno adeeggan oo ku siin doona suurtagalnimada inaad isla markiiba ogaato haddii iPhone aad qorsheyneyso inaad iibsato wuxuu ku xiran yahay IMEISi fudud u buuxi macluumaadka u dhigma lambarka IMEI ee qalabka aad rabto inaad ku iibsato foomka soo socda, iyo sidoo kale emaylka aad rabto inaad ku hesho warbixinta jawaabta oo aad ku ogaan doontid xaaladda IMEI block. Kaliya adoo buuxinaya xogta foomka waxaad kuheli doontaa emayl wata warbixin kusaabsan xogta lagaa codsaday kudhowaad shan iyo toban daqiiqo (xaaladaha qaarkood qaaska ah dib ayey u dhigi kartaa ilaa 6 saacadood).